Iyo nyowani vhezheni yeOpenZFS 2.1 yakatoburitswa uye inouya nerutsigiro rweDRAID, kugadziridza kwekuenderana uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeOpenZFS 2.1 yakatoburitswa uye inouya neDRAID rutsigiro, kugadzirisana kwekuenderana uye nezvimwe.
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeiyo OpenZFS 2.1 chirongwa chakaziviswa uye mune iyi vhezheni nyowani kuvandudzwa kwakapihwa uko iko kwakanyanya kukosha shanduko mune iyi vhezheni ndiko kutsigirwa kwakawedzerwa kweDRAID.
Kune avo vasina kujairana neOpenZFS, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi inopa kuiswa kwezvikamu yeZFS inoenderana neyese faira system uye nemaneja vhoriyamu. Zvikuru sei, zvinhu zvinotevera zvinoitwa: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Yakatemerwa Vhoriyamu) uye ZPL (ZFS POSIX Layer).
Uye zvakare, chirongwa icho oIyo inopa kugona kushandisa ZFS seye backend yeLuster yakaunganidzwa faira system. Basa reprojekti rakavakirwa pane yekutanga ZFS kodhi yakatumirwa kubva kuOpenSolaris projekiti uye inowedzeredzwa nezvigadziriso uye zvigadziriso kubva munharaunda yeIllumos Iyo purojekiti iri kuvandudzwa nekutora kwevashandi kubva kuLivermore National Laboratory pasi pechibvumirano neUnited States Department of Energy.
Iyo kodhi inogoverwa pasi pemahara rezinesi reCDDL, izvo zvisingawirirane neGPLv2, iyo isingatenderi kubatanidza OpenZFS mune yakakwira Linux kernel, nekuti hazvitenderwe kusanganisa kodhi pasi peGPLv2 neCDDL marezinesi. Kugadzirisa kusapindirana kwekupa marezinesi, zvakatemwa kugovera chigadzirwa chose pasi peCDDL rezenisi sedhiraivho yakadzikunurwa inotakurika yoga kubva kune kernel. Iko kudzikama kweiyo OpenZFS kodhi kodhi inoonekwa seyakaenzana neimwe FS yeLinux.
Main nyowani maficha eOpenZFS 2.1
Mune iyi vhezheni itsva hukuru hukuru hunoratidzwa ndeye rutsigiro rweTRAID tekinoroji (Distributed Spare RAID), iyo iwe yaunogona kugadzira mapoka uchishandisa imwe nyowani yakaparadzirwa RAIDZ iyo inogonesa zvinoshamisa nekukurumidza nguva dzekudzoreredza uchishandisa yakasanganiswa inopisa spares. Iyo DRAID chaiyo yekuchengetedza inoumbwa nemapoka akati wandei emukati RAIDZ, rimwe nerimwe riine zvishandiso zvekuchengetedza nemidziyo yekuchengetera maburi eparutivi. Aya mapoka akapararira pamadhiraivha ese kuti ashandise zvakakwana dhisiki bandwidth iripo. Panzvimbo pekuparadzanisa kupisa-kupora dhisiki, dRAID inoshandisa iyo pfungwa yekuisa zvine musoro kugovera kupisa-kudzoreredza mabhureki pane ese madhisiki mune akarongeka.
Imwe yeshanduko inomira pachena ndeye kugarisana kwepfuma, sezvo ikozvino ichibvumira maneja kudoma seti yezvinhu zvinofanirwa kuve zvinogoneswa paboka. Iyi granular control inoita kuti zvive nyore kugadzira mapoka anotakurika uye inochengetedza kuenderana kweboka pane ese OpenZFS vhezheni uye pamapuratifomu.
Uye zvakare, isu tinogona zvakare kuwana izvo yakapa kugona kusevha manhamba pane mashandiro eboka mune iyo InfluxDB dhatabhesi fomati yakagadzirirwa kuchengetera, kuongorora, uye kushambadzira data muchimiro chenguva yenguva (zvikamu zvemiparamende kukosha panguva yakatarwa yenguva). Kuendesa kune InfluxDB fomati, iwo murairo "zpool_influxdb" unopihwa.
Zvakare pamwe neiyo pfuma ye «kuenderana, zpool gadzira -u iyo inoremadza otomatiki makomo,« zpool nhoroondo -i »- inoratidzira munhoroondo yekushanda kweiyo nguva yekuitwa kwemirairo yega yega,« zpool chinzvimbo »mune iyo yakawedzera yambiro nezve disks ine suboptimal block size uye "zfs rename -u" iyo inoshandura iyo fileystem isina kuidzokorora.
Yeimwe shanduko dzinomira yeiyi vhezheni itsva:
Kuvandudzwa kwekudyidzana kweI / O kuita.
Yakagadziridzwa preetch mashandiro eakaenzana data rekuwana basa kuwanda.
Yakagadziriswa scalability nekuderedza kukiya kukakavara.
Kuderedzwa kwekupinza nguva yedziva rekushambira.
Kuwedzeredza kwazvino kwemapeji emurume
Kuderedzwa kupatsanurwa kweZIL mabhuroko.
Kuvandudzwa kwekuita kwekudzokorora mashandiro.
Yakawedzera otomatiki ABI sisitimu yeruzhinji raibhurari nzvimbo
Yakagadziridzwa ndangariro manejimendi.
Kernel module kurodha yakamhanyisa.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa iyo ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeOpenZFS 2.1 yakatoburitswa uye inouya neDRAID rutsigiro, kugadzirisana kwekuenderana uye nezvimwe.
Photocall TV: iyo chaiyo gwara rekuona TV neredhiyo chiteshi zvemahara
Neovim 0.5 inouya neLSP rutsigiro, Lua zvinowedzera uye nezvimwe